Izindaba - Incazelo kanye nokuxazulula inkinga ye-gear motor
I-Motor With Speed ​​​​controller
Ingelosi yesokudla RC/RT/RH/RA Gear Motor
I-DC Gear Motor
Hlanza i-DC Gear Motor
I-Brushless DC Gear Motor
I-Planetary Gear Motor
Gcoba i-Planetary Gear Motor
Incazelo kanye nokuxazulula inkinga ye-gear motor
Isingeniso esiyisisekelo se-gear moto
I-Speed ​​reducer yakhiwa igiya kanye ne-motor, ngakho-ke sikubiza ngokuthi i-gear motor.I-Gear motor evame ukuhlinzekwa ngama-set.gear motor angasetshenziswa kabanzi kunsimbi yensimbi, ukuthutha izinto zokuhamba, ukukhiqizwa kwemoto, amandla kagesi, nezinye izimboni.Isetshenziswa kabanzi I-gear motor ikakhulukazi yizizathu ezilandelayo: ukwakheka okulula, konga isikhala, ukwelula impilo yesevisi, ukunciphisa umsindo, ukuthuthukisa i-torque namandla okulayisha.Isilinganiso sokunciphisa isivinini sokufaka igiya kanye nesilinganiso sejubane lokuphumayo.
Uchungechunge umjikelezo wamagiya eplanethi, Ngokujwayelekile elikhulu lingafinyelela izinga lesi-3, ukusebenza kahle kuzoncishiswa.
Umsindo wezimoto zamagiya ovela ikakhulukazi ngenxa yokungqubuzana kwegiya elidlulisayo, ukudlidliza kanye nokungqubuzana.Indlela yokunciphisa ngempumelelo umsindo, ukuwenza uvumelane nemvelo ekhaya naphesheya kuyisihloko esibalulekile socwaningo.Izazi eziningi ekhaya nasemazweni aphesheya zithatha ukuhluka kokuqina kwenetha legiya njenge igiya elishintshashintshayo lomthwalo, ukudlidliza nomsindo.Ngezinguquko zefomu, yenza umthwalo wayo oguquguqukayo nesivinini ukuze unciphise ukuguquguquka, ukuze unciphise umsindo.
Ukuhluleka kwezimoto ezihloselwe kanye nezixazululo
Ikhiqiza amagiya anhlobonhlobo, amabhokisi egiya, izinjini egiyelwe kanye neminye imikhiqizo, enezinhlobonhlobo zamamodeli ahlukene angahlangabezana nesidingo somphakathi.Ibuye yenziwe ngokwezifiso yamukelekile. U-gearbox weplanethi.Nokho, ngokwezidingo zamakhasimende sithuthukise u-gearbox welambu lemoto nokunye .I-Shznzhen zhaowei ingahlanganisa noma yiziphi izingxenye uma ikhasimende lizidinga.
Okulandelayo kuyinkinga futhi kukhishwe indlela ye-inclined gear motor kanye ne-turbinegear motor.Uma i-helical gear motor ishisa ngokweqile, izizathu eziyinhloko zalesi simo ngokuyinhloko ukugcwala ngokweqile noma ukungenele noma uwoyela wokugcoba ngokweqile. Isixazululo ukuhlola umthwalo wangempela, ulungiswe inani elishiwo noma i-motor yegiya lamandla amakhulu, ukusetshenziswa kukawoyela kufanele ngokuvumelana nezinhlinzeko. .Amafomu amabili omsindo we-helical gear motor: okungavamile kokuzinza nokungazinzi komsindo wokusebenza.Isizathu esikhulu somsindo umonakalo wokuthwala, i-meshing engavamile, ukungcoliswa kwamafutha noma ukungabi khona kwamafutha, njll.Isixazululo sikakhonkolo: hlola inani kawoyela noma ikhwalithi, ithole ukuthi uwoyela uwukungcola noma ungakhetha uwoyela.
Idivayisi yokufaka umoya yokuvuza kwe-Increned gear motor ikakhulukazi ngenxa yokuthi uwoyela muningi kakhulu okubangele ukuthi idivayisi yokukhipha umoya ifakwe ngendlela engafanele.Isixazululo iwukuba izinga likawoyela elingaguquki kanye nokulungisa idivayisi yokufaka umoya yokufaka umoya.
Izizathu zokuvuza ziwumonakalo ovaliwe, zingathintana nabakhiqizi ukuxazulula izinkinga zomonakalo.
Isikhathi sokuthumela: Jun-18-2021